Kwimpelaveki ezayo iOverwatch yasimahla yePC, PS4 kunye neXbox One | Iindaba zeGajethi
Kwimpelaveki ezayo ungadlala iOverwatch yasimahla kwiPC, PS4 kunye neXbox One
Ukugqithisa kuye kwaba omnye wemidlalo yefashoni yomzuzu Kwaye kuya kufuneka ubone ii-GIF zoopopayi ezigcwala kwinethiwekhi yenethiwekhi ukuze uqonde ifuthe lomdlalo wevidiyo kwiingqondo ezingazinzanga zezigidi zabadlali kwihlabathi liphela. I-shooter yexesha elizayo enezinto ezibetha kakhulu kwaye inelo bhaso likhethekileyo le "Blizzard".
Ukuba awuzange ube nethuba lokuba ngomnye wabo Abadlali abangaphezulu kwezigidi ezingama-20, IBlizzard yoLonwabo ifuna ukuba utsibe kwisikhephe esikhulu sokuba lo mdlalo wevidiyo ubekho ukusuka ngoLwesihlanu olandelayo kude kube yiCawa. Ngokukodwa, iya kuba yinkqubo yePC, iPlaystation 4 kunye neXbox enye eya kuthi inyuse eyona midlalo yemidlalo yomtsalane kwi-shooter yabadlali abaninzi.
Kungenxa yoko le nto iBlizzard izakuthatha abadlali abatsha ngenxa yempelaveki enkulu yasimahla yeOverwatch kwiPC, iPlayStation 4 kunye neXbox One.Ngezo ntsuku zintathu, uya kuba nakho ukufikelela kwi Gcwalisa ireferensi yamagorha angama-22 kunye neemephu ezili-13 iyafumaneka ukuba idlalwe ngeendlela ngeendlela, kubandakanya ukuDlala ngokuKhawulezayo, iMidlalo yesiqhelo kunye neBrawl yeVeki nganye.
Abadlali baya kuba nakho ukulinganisa, fikelela kwiibhokisi zokuphanga kwaye uvule iindlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Abo bathatha isigqibo sokuthenga ikopi yeOverwatch emva kokuzama umdlalo baya kuba nenketho yokugcina inkqubela phambili yabo yenziwe kwimpelaveki. Ewe uyakufuna ukusebenzisa iBattle.net efanayo, i-Xbox Live okanye iakhawunti yeSon Entertainment obudlala kuyo.
Ixesha lasimahla liza kuqala NgoNovemba 18 ngo-8 ebusuku. Ixesha leSpanish kwaye liya kuphela nge-1 kusasa ngoMvulo kusasa. Imephu icacisa kakuhle ukuqala kwempelaveki yeOverwatch emangalisa kuphela kwimozulu ebandayo nemvula ehamba nathi.
Khuphela i-BattleNet kwi-PC
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Kwimpelaveki ezayo ungadlala iOverwatch yasimahla kwiPC, PS4 kunye neXbox One
IHTC Vive iya kuba nekhithi yokusebenza ngaphandle kweentambo
Iirobhothi zisongela isibini kwisithathu semisebenzi ngokwe-UN